Umuntu ubhubhisa amadivayisi amaningi esitolo se-Apple [Ividiyo] | Ngivela kwa-mac
Asicaci kahle ukuthi kungani lo mlingiswa eshaywe ngamadivayisi amahle we-Apple esitolo esiseFrance, ikakhulukazi enxanxatheleni yezitolo eDion. Okwenzekile ukuthi umsebenzisi ungene esitolo nebhola lalabo abasetshenziselwa ukudlala ipetanque (izitsha) nokuthi uma izwi lokulamula lahlaselwa yibhola okokuqala nge-iMac (engabhalisiwe ngoba akekho obekulindele lokho kusabela) bese kuthi nge-iPhone, i-iPod bese uqedela umsebenzi ngeMacBook Air eyeqe indlela yakhe.
Le yividiyo enengxenye yokuqala kwezintathu, ebezilengisiwe umsebenzisi orekhode ngaso sonke isikhathi indawo lapho izivakashi nabasebenzi besitolo babandakanyeka khona ngesikhathi somcimbi:
Akunakushiwo ukuthi lokhu kuzokhokhelwa umshwalense wesitolo uqobo nokuthi ukusebenza kwabasebenzi nezivakashi esitolo kuyisibonelo, ngoba ngaleso sikhathi nezimo zalolu hlobo kulula ukucasuka futhi kubangele ukulimala okukhulu kunokuhle. Abasebenzi baphendula lo mlingisi ngokuzola okuthile bese belinda ukufika kwezokuphepha kwalesi sikhungo ukuzothatha lo muntu. Futhi asibaboni abantu abaningi esitolo ngakho-ke yisikhathi esinzima kuwo wonke umuntu futhi kungenzeka ukuthi abantu abaningi bashiye esitolo ngesikhathi "sokuhlanya" kwalo mlingiswa.
Vele, kuzofanele ukhokhe into ephukile engafinyelela kalula kuma-euro ayizinkulungwane eziyishumi noma ngaphezulu, kepha inkinga ukuthi kumholele ekubangeleni lokho kubhujiswa esitolo lapho bonke abasebenzisi be-Apple bazi ukuthi ifemu ivame ukuphendula kahle kakhulu izinkinga zabasebenzisi. Kunoma ikuphi into enhle kakhulu ukuthi akekho olimalile ngaphandle kwamadivayisi we-Apple.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Umuntu ubhubhisa amadivayisi amaningi esitolo se-Apple [Ividiyo]